कुकुर वा बिरालो, कुन तपाईंको लागि उपयुक्त छ? | कुकुरहरु को विश्व
कुकुर वा बिरालो, कुन तपाईंको लागि उपयुक्त छ?
हाम्रो घरमा पशुलाई स्वागत गर्नु महत्त्वपूर्ण निर्णय हो, त्यसैले हामीले यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। सबै भन्दा सामान्य घरपालुवा जनावर सामान्यतया कुकुर र बिरालाहरू हुन्। एक वा अर्को बीच छनौट गर्दा, हामीले गर्नै पर्छ फाइदा र विपक्ष के हो राम्ररी मनन गर्नुहोस् प्रत्येक एक को, र एक लाई छनौट गर्नुहोस् जुन हाम्रो जीवनशैलीको लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ।
1 राम्रो निर्णय लिनुको महत्त्व
3 बिरालो हुनुको फाइदा
4 एक बिराला को नहुनु
5 कुकुर हुनुको फाइदा
6 कुकुर हुनु भन्दा बेफाइदाहरु
7 सही निर्णय
राम्रो निर्णय लिनुको महत्त्व
प्रत्येक एक यी जनावरहरू एक अर्का भन्दा धेरै फरक छन्, र फरक हेरचाह आवश्यक छ। हाम्रो छनौटमा गल्ती गर्दा ठूलो असुविधा हुन सक्छ; उदाहरण को लागी, यदि तपाई एक्लो घरमा धेरै समय खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने घरपालुवा जनावरको रूपमा कुकुर हुनु गल्ती हुनेछ। त्यस्तै प्रकारले, यदि हामी हाम्रो कपडा र सोफेमा कपाल सहन सक्दैनौं भने बिरालाहरू उपयुक्त हुँदैनन्।
सही निर्णय लिने बित्तिकै यसले हामीलाई यी घरहरूमा प्रत्येक जनावरलाई स्वागत गर्ने पक्ष र विपक्षहरूको सूची बनाउन मद्दत गर्दछ।
बिरालो हुनुको फाइदा
स्वतन्त्रता अवश्य पनि, बिरालाहरूलाई हाम्रो कम्पनी चाहिन्छ, तर तिनीहरू पनि एक्लै मन पराउँछन्। तिनीहरूलाई आराम गर्नको लागि आफ्नै ठाउँ र शान्त समय आवश्यक छ, हाम्रो चिन्ताबाट पनि।
तिनीहरूलाई हिड्नु आवश्यक पर्दैन। पुच्चीस घरका जनावरहरू हुन्, उनीहरूलाई घरको सुविधा मनपर्दछ। तिनीहरूलाई हिंड्न वा घर छोड्नु आवश्यक पर्दैन, यदि हामीसँग थोरै समय छ भने निश्चित फाइदा हुन्छ।
तिनीहरू धेरै स्वच्छ छन्। तिनीहरू आफैंको स्यान्डबक्समा राहत दिन्छन्। हामीले यसलाई राम्रो अवस्थामा राख्नको लागि दिनमा दिनमा एक पटक मात्र सफा गर्नुपर्दछ। थप रूपमा, यी पशुहरूलाई बारम्बार नुहाउन आवश्यक पर्दैन, यद्यपि तिनीहरूलाई ब्रश चाहिन्छ।
तिनीहरू मायालु छन्। कसै-कसैको विश्वासको बावजुद, कुकुरहरू कुकुरहरू जत्तिकै मायालु हुन सक्छ। तिनीहरू लाड प्यार गर्छन् र आफ्नैसँग सम्पर्क राख्छन्।
एक बिराला को नहुनु
तिनीहरू फर्निचर खरोंच। Flines अक्सर हाम्रो घरमा फर्निचर र कपडा स्क्र्याच को कष्टकर बानी अपनाउँछ। यद्यपि, हामी यस समस्यालाई फेरोमोन स्प्रे, स्क्र्यापर र विभिन्न प्रशिक्षण युक्तिहरूको प्रयोगसँगै समाधान गर्न सक्दछौं।
हेयरहरू अधिकांश बिरालाहरूले कपालको राम्रो मात्रामा बगाउँदछ जुन हाम्रो कपडा, सोफा र ओछ्यानमा स्थिर रहन्छ।
कुकुर हुनुको फाइदा
यसले तनाव कम गर्दछ। कुकुरको कम्पनीले हामीलाई तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ। मात्र यसलाई स्ट्रोक गरेर हामी हाम्रो भावनात्मक स्थिति सुधार गर्छौं। वास्तवमा कुकुरहरू प्राय: नैराश्य र चिन्ताको उपचारका साथसाथै अन्य मनोवैज्ञानिक विकारहरूको पनि उपचारमा बूस्टरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
आसीन जीवनशैली लड्नुहोस्। कुकुरले हामीलाई दिनमा दुई वा तीन पटक हिंड्न बाध्य पार्छ, जसले हाम्रो शारीरिक अवस्था बढाउँदछ र स्वास्थ्य समस्याहरू रोक्छ।
सामाजिक जीवन लाई बढावा दिन्छ। कुकुरहरु एक अद्भुत कुराकानी टुक्रा हो। तिनीहरूसँग हिंड्दा हामीलाई अन्य मालिकहरूसँग कुराकानी गर्न र व्यक्तिलाई भेट्न मद्दत गर्दछ।
आत्मसम्मान सुधार गर्नुहोस्। यी पशुहरूले हामीलाई प्रदान गर्ने स्नेहले हामीलाई आफैंलाई राम्रो बनाउँछ। यसले हाम्रो आत्मसम्मानमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
कुकुर हुनु भन्दा बेफाइदाहरु
निर्भरता। कहिलेकाँही कुकुरहरु अत्यधिक आश्रित हुन सक्छन्, बिच्छेदन चिन्ता विकासको बिन्दुमा। तिनीहरूलाई एक्लै छोड्दा यो ठूलो असुविधा हुन सक्छ।
तिनीहरू हल्ला गर्छन्। निस्सन्देह, सबै कुकुर एकै हुँदैनन्, किनकि तिनीहरूको चरित्र उनीहरूको शिक्षाबाट धेरै प्रभावित हुन्छ। तर केहि केसहरूमा ती अधिक छाल लिन सक्छन् जसले छिमेकीहरूलाई समस्या गर्दछ।
तिनीहरू त्यो सफा छैनन्। तिनीहरू घरमै आराम गर्न सक्दछन् यदि हामी उनीहरूलाई समयमै तल झ्याउँदैनौं भने, केहि सामान्य कुरा जब तिनीहरू पपीहरू वा वृद्धहरू हुन्छन्। यदि हामी हाम्रो घरमा कुकुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं भने, हामीले यस असुविधालाई स्वीकार्नुपर्नेछ।
विनाशकारी व्यवहार। यदि कुकुरले धेरै समय खर्च गर्दछ भने यसले विनाशकारी व्यवहार मात्र अपनाउन सक्छ र यसको वरिपरिको सबै चीज नष्ट गर्दछ।
हामीले यी सबै विवरणहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ र एक जनावर वा अर्कोको लागि रोज्नु अघि यसका बारे राम्ररी सोच्नु पर्छ। हामी सचेत हुनुपर्दछ कि यो छनौटले हाम्रो जीवनलाई र त्यसले आकार दिन्छ घरपालुवा जनावर पाउनु ठूलो जिम्मेवारी हो। सही निर्णय गर्न आवश्यक समय लगानी गरौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुर वा बिरालो, कुन तपाईंको लागि उपयुक्त छ?
मेरो कुकुरले धेरै भुक्छ, मैले के गर्नुपर्छ?